တော်လှန်ရေးသတင်းသမားတဦးရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (၂၄) ~ Htet Aung Kyaw
တော်လှန်ရေးသတင်းသမားတဦးရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (၂၄)
7:29 AM Htet Aung Kyaw2comments
ဘိလပ်သွား DVB သတင်းသမားများ
အုပ်ချုပ်ရေးဘက်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ဒီလိုအငြင်းပွားလို့ကောင်းတုန်း ၂၀၀၂ ခုနှစ် မေလလယ်လောက်မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝေလပြည်နယ် ကားဒစ်တက္ကသိုလ်မှာ ဖွင့်လှစ်တဲ့ (Broadcast Journalism) အသံလွှင့် သတင်းပညာ သင်တန်းတက်ဖို့ ကျနော်နဲ့မခင်နှင်းထက်တို့ ခရီးထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ထိ မြန်မာ စာအုပ်အတု ကိုင်နေရဆဲဖြစ်ပေမယ့် ဥရောပလေဆိပ်တွေမှာတော့ ထိုင်လေဆိပ်မှာလို စစ်တာ၊ ရစ် တာ သိပ်မရှိပါ။ လန်ဒန်လေဆိပ်ရောက်တော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းမှာသင်ဖူးတဲ့ ''ဘိလပ်ပြန် မောင်သောင်းဘေ'' ကို သွားသတိရမိပါတယ်။ ''ရေချမ်းချမ်း တခွက်လောက်ပေးပါ'' လို့ ကိုယ့်ဘာသာ ပြောရင်း ပြုံးမိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘိလပ်ရေက နော်ဝေးရေလောက် ဘယ်အေးပါ့မလဲ။
(ကျနော်တို့ငယ်စဉ်ကနေ အခုချိန်ထိ အသုံးများနေဆဲ နေရှယ်နယ်ရေဒီယို)
လေယာဉ်ကွင်းကနေ ကားဒစ်မြို့ဆီ တိုက်ရိုက်မသွားသေးဘဲ DVB အယ်ဒီတာဟောင်း (အဲဒီအချိန်ထိ အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတခုဖြစ်တဲ့ စာအုပ်စဉ်အစီစဉ်ကို DVB အတွက် ပုံမှန်ပို့နေဆဲလို့ထင်ပါတယ်) ဒေါက် တာအောင်ခင်ရဲ့ အိမ်ဆီသွားပါတယ်။ သူ့အိမ်က နှစ်ထပ်အိမ်ဖြစ်ပြီး အိမ်နောက်ဖေးမှာ စိုက်ခင်းသေး သေးလေးလည်း ရှိပါတယ်။ သူဟာ စာအလွန်ဖတ်၊ အလုပ်အတော်လုပ်သူဖြစ်ပေမယ့် အားကစားကို လည်း မပျက်မကွက်လုပ်ပုံရပါတယ်။ ရေချိုးခန်းဘေးက အခန်းတခုမှာ အပြေး သို့မဟုတ် လမ်း လျှောက်လေ့ကျင့်တဲ့စက် (Running Machine) ကို တွေ့ရပါတယ်။ အားကစားသမားဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျ နော်လည်း ဒီစက်ကိုမြင်မှ ကိုယ်လည်း အားကစားပြန်လုပ်ဦးမှလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။
ညနေပိုင်းမှာတော့ စကားဝိုင်းဖွဲ့ရင်း DVB မှာ သူ တာဝန် ထမ်းစဉ်က အတွေ့အကြုံတွေ၊ လက်ရှိ DVB ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ သတင်းထုတ်လုပ်မှုနဲ့ အနာဂတ်အလားလာတွေအပေါ် သူ့အမြင်ကို ဒေါက်တာ အောင် ခင်က အတော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ အဓိက အချက်ကတော့ DVB ရဲ့ လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေမှု ပုံစံကို သူ အားမရဘူးလို့ ကျနော်နားလည်မိပါတယ်။
နောက်တနေ့မနက်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ကားဒစ်ကနေ ပြန်လာလည်ချိန်မှာလားမသိပါ။ BBC အသံလွှင့် ဌာနဆီ ကျနော်တို့ရောက်သွားပါတယ်။ လန်ဒန်ကိုရောက်စဉ် မဖြစ်မနေသွားမယ့်အထဲမှာ ၈ လေးလုံး ကာလတုန်းက အရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့၊ ငယ်စဉ်ကတည်းကနေ အခုချိန်ထိ နေ့စဉ်နီးပါး မပျက်မကွက် နားထောင်ခဲ့တဲ့ BBC မြန်မာပိုင်းအစီစဉ်ရုံးက ထိပ်ဆုံးမှာပါ ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဒေါ်တင်ထားဆွေက ဌာနမှူးဖြစ်နေပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ သူအပါဝင် ထိုင်းမှာ တာဝန်ထမ်းစဉ်က သိခဲ့သူတွေကတော့ ကို ကျော်ဇံသာ၊ ကိုမင်းထက်နဲ့ ကိုကိုအောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
နေမ၀င်အင်ပါယာကို ထူထောင်ခဲ့သူ ဗြိတိသျှတွေရဲ့ သတင်းဌာနကြီးဆိုတော့ DVB နဲ့ ဘယ်လိုမှ နှိုင်း ယှဉ်လို့မရ။ BBC တံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့ Bush House အဆောက်ဦကြီးက ခန့်ငြားလှပါတယ်။ အထပ် ပေါင်းများစွာ၊ အခန်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့ ဒီရုံးခန်းကြီးကနေ နိုင်ငံတကာဆီ ၂၄ နာရီအသံလွှင့်နေပြီး မြန်မာဌာနဆိုတာ အဲဒီဌာနများစွာထဲက တခုမျှသာ။ ဒါပေမယ့် တခုချင်းနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်တော့ DVB ရုံးခန်းက မြန်မာဌာနရုံးခန်းထက်တော့ ပိုကျယ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့မှာက ရုံးခန်းနဲ့ စတူဒီယိုက နီးနီးလေး။ အသံလွှင့်ခါနီးမှ စတူဒီယိုထဲဝင်သွားရုံပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာက နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနကြီး ဆိုတော့ ရုံးခန်းတွေက စတူဒီယိုတွေနဲ့သီးခြားစီ၊ ဟိုအဝေးကြီး တထပ်စီမှာ။
ပြီးတော့ အင်ဂျင်နီယာ (စက်ဆရာ) က အနောက်တိုင်းသားဆိုတော့ မြန်မာလိုတင်ထားတဲ့ အသံတွေ ကို နားမလည်။ ၁-၂- ၃- ၄ စီထားတဲ့အတိုင်း အသံဖွိုင်တွေကို တန်းစီဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ DVB မှာလို ခလုတ်မှားနှိပ်မိရင် အော်ပြောပြီးချက်ချင်း ပြန်ပြင်ဖို့မလွယ်ပါ။ ဒီတော့ တာဝန်ကျ အယ်ဒီတာက အပြင်မှာ အချိန်ပြည့်စောင့်ပေးနေရပါတယ်။ စတူဒီယိုထဲမှာလည်း သတင်းဖတ်သူက ၄ ဦးတောင်ရှိမလားပဲ။ ကျနော်တို့ DVB မှာက အဲဒီအချိန်ထိ အသံလွှင့်ဝန်ထမ်းအားလုံးပေါင်းမှ ၅ ဦး ထက်မပိုပါ။ အဲဒီ ၅ ဦးက ညပိုင်းရော၊ မနက်ပိုင်းကိုပါ တာဝန်ယူထုတ်လုပ်ပေးနေရတယ်ဆိုတော့ BBC ကလူတွေ အံ့သြနေကြလေရဲ့။
ဝေလပြည်ရောက် နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်များ
လန်ဒန်မှာ ၃ ရက်လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက် ဝေလပြည်နယ်မြို့တော် ကားဒစ်မြို့ဆီ ကျနော်တို့ရောက် လာပါတယ်။ ကားဒစ်တက္ကသိုလ်မှာ တက်တယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်တော့ နွေရာသီတက္ကသိုလ်ပိတ် ထားချိန်မှာ ရက်တိုအထူးသင်တန်းတက်ရတဲ့သဘောပါ။ တက္ကသိုလ်နဲ့ ကျောင်းသားအဆောင်တွေက တမိုင်လောက်ဝေးပြီး မိနစ် ၃၀ မက လမ်းလျှောက်သွားရပါတယ်။
(၂၀၀၂ ခနှစ်ကတွေ့ရတဲ့ DVB သတင်းထောက်များအပါဝင် အသံလွှင့်သတင်းပညာ သင်တန်းသားများ)
မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်က အဆောင်တွေလောက်မှာသာနေခဲ့ဖူးသူတဦးအတွက်တော့ ဒီကျောင်းက အဆောင်က အတော်သားနားနေပါတယ်။ ၄ ထပ်တိုက်အဆောင်မှာ တယောက်အိပ်ခန်း ၄ ခန်းစီပါတဲ့ အခန်း ၄ ခန်းနဲ့ မီးဖိုချောင်တခုကို အခန်းကြီးတခုစီအဖြစ် ကန့်ပေးထားပါတယ်။ တယောက်အိပ်ခန်းထဲ မှာတော့ ကုတင်တလုံး၊ စာကြည့်စားပွဲတလုံးနဲ့ ရေချိုးခန်းနဲ့ အိမ်သာပါ ပါတဲ့အတွက် ဟိုတယ်အခန်း လိုဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက တက္ကသိုလ်တွေမှာလည်း အခုနောက်ပိုင်း ဒီလိုအခန်းတွေရှိနေပြီလား တော့မပြောတတ်ပါ။
၃ လတာ အထူးသင်တန်းကိုတက်ဖို့ ရောက်လာသူတွေထဲမှာတော့ ဥရောပ၊ အမေရိကားနဲ့ သတင်း လွတ်လပ်ခွင့်ရှိပြီးသားနိုင်ငံတွေက သတင်းထောက်တွေမပါပါ။ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် မရှိသေးတဲ့ အာ ဖရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ အာရှကလူတွေချည်းဖြစ်ပါတယ်။ Broadcast Journalism အသံလွှင့် မီဒီယာနဲ့ Print Journalism ပုံနှိပ်မီဒီယာ လို့ ၂ ပိုင်းခွဲထားပြီး အဲဒီကာလက Online Media ကျယ် ကျယ်ပြန့် ပြန့်မရှိသေးပါ။
ကျနော်တို့တက်ရတဲ့ Broadcast Journalism ထဲက ရေဒီယိုသင်တန်းသားတွေကို ပြောရမယ်ဆိုရင် မြန်မာ ၂ ဦး၊ တိဘက်တဦး၊ ဆိုက်ပရပ်တဦး၊ မာလာဝီ ၂ ဦး၊ ဆီနီဂေါတဦး၊ ဆီလာလီယွန်းတဦးနဲ့ ယူဂန်ဒါကတဦး အပါဝင် ၉ ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်-သံဘက်မှာတော့ အိန္ဒိယကလူတွေအတော်များပါ တယ်။ သင်တန်းသား ၁၁ ဦးမှာ အိန္ဒိယက ၈ ဦးပါဝင်ပါတယ်။ ကျန် ၃ ဦးထဲမှာတော့ ဖိလစ်ပိုင်တဦး၊ ဂျော်ဒန် တဦးနဲ့ ကျုးဘားတဦးပါဝင်ပါတယ်။ Print Journalism ဘက်မှာတော့ ၈ ဦးသာရှိပြီး မလေး ရှား၊ ပါပူး ၀ါးနယူးဂီနီ၊ ဘာရိန်း၊ ဆိုက်ပရပ်၊ ဘိုင်ရာရု၊ ဇင်ဘာဘွေ၊ မာလာဝီနဲ့ ယူဂန်ဒါမှ တဦးစီပါ ၀င် ပါတယ်။
ဒီသင်တန်းဆီ ရောက်လာသူအတော်များများဟာ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအသီးသီးရှိ British Council မှာ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲအောင်ပြီးမှ စကောလားရှစ်ပုံစံမျိုးနဲ့ ရောက်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပအခြေစိုက် ကျ နော်တို့ DVB ကို အထူးခြွင်းချက်အနေနဲ့ နှစ်စဉ် တဦးကနေ နှစ်ဦးအထိ ၀င်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ကျ နော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ ဆရာကျော်ရင်မြင့်၊ ဆရာဝီလျှံ၊ ဆရာမောင်သစ်ဆင်း တို့လည်း ကျနော်တို့မတက်ခင်ကတည်းက ဒီသင်တန်းကို တက်ဖူးကြပါတယ်။
Thomson Foundation ကဦးစီးကျင်းပတဲ့ ဒီသင်တန်းမှာ အဓိကတာဝန်ယူသင်ကြားသူတွေကတော့ BBC က သင်တန်းဆရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ Broadcast Journalism (ရေဒီယိုနဲ့ ရုပ်-သံ) က တခန်း၊ Print Journalism (သတင်းစာ) က တခန်းအဖြစ် သီးခြားခွဲသင်ပါတယ်။ ယေဘုယျပြောမယ်ဆိုရင် တော့ ကျနော်တို့ DVB မှာ နေ့စဉ်လုပ်နေတာနဲ့ ဒီမှာသင်တာ ဘာမှသိပ်မကွာပါ။ ဒါပေမယ့် သတင်း ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေ၊ အသံအရည်သွေးကိစ္စတွေ၊ စတိုရီရှာဖွေဖန်တီးမှုစွမ်းရည်တွေအတွက် တော့ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးရလာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင် တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ် မြန်မာစာကျောင်းသားဘ၀ကနေ ၁၉၈၈ မှာ တောခို လာခဲ့တဲ့ကျနော်ဟာ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဘာကျောင်းမှဆက်မတက်ဖြစ်ပါ။ မတက်ဆို တောထဲမှာလည်း တက်စရာ ဘာကျောင်းမှမရှိပါ။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းအပါဝင် ရက်တိုသင်တန်း အနည်းအ ကျဉ်းတော့ တက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသတင်းပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ သင်တန်းဆိုလို့ IMMF (Indochina Media Memorial Foundation) ကပို့ချတဲ့ သတင်း ၂ ပတ်ကြာ သင်တန်းတခုသာ ၁၉၉၈ တုန်းက ထိုင်း နိုင်ငံမှာ တက်ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုသင်တန်းဟာ ကျနော်ရဲ့သတင်းသမားဘ၀အတွက် အတော် အရေးပါတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
သင်တန်းသားတွေ အားလုံးဆုံတဲ့ ပထမ ဆုံးနေ့ မိတ်ဆက်ပွဲမှာ သတင်းပညာကို စသင်ပေးလိုက်ပုံ လေးက ပညာသားပါလှပါတယ်။ သင်တန်းသား ၂ ဦးစီကို အချင်းချင်းမိတ်ဆက်ခိုင်းပြီး တဦးအ ကြောင်းတဦးက ပြန်ရှင်းပြရတဲ့ Presentation, Reporting လုပ်ရတဲ့သင်ခန်းစာပါ။ အတွေ့အကြုံ မရှိတဲ့ကျနော်က သင်ခန်းစာလုပ်ခိုင်းမှန်းတောင် မသိလိုက်ပါဘူး။ ကျနော်နဲ့စကားပြောရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က နယူးဒေလီအခြေစိုက် ဂျာမန်တီဗွီအတွက် တာဝန်ထမ်းနေသူ။ သူမေးတာကို ဖြေနေရင်းနဲ့ ကိုယ်ပြန် မေးဖို့တောင် အချိန်သိပ်မရလိုက်ပါ။
အားလုံးပြီးလို့ Reporting ပြန်လုပ်တော့ သူက ကိုယ့်အကြောင်းပြောသွားလိုက်တာ ၃ မိနစ်စာ ကွက် တိ ရွန်းရွန်းဝေလို့၊ ၈ လေးလုံးအရေးတော်ပုံကနေ တောခိုကျောင်းသားဘ၀၊ တောထဲက ငှက်ဖျားနဲ့ ဒဏ်ရာရရဲဘော်များအခက်ခဲ၊ AK 47 ကတဖက်၊ မိုက်ကရိုဖုန်းက တဖက်ကိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေနေ၊ မိုင် ၅၀၀၀ ကျော်အဝေးကနေ အသံလွှင့်နေရတဲ့ဘ၀ စုံလို့ပါပဲ။ ကျနော့်အလှည့်ကျတော့ ဘာမှတင်ပြ စရာမရှိ။ သူ့အမည်၊ သူ့မိသားစုနဲ့ သူ့တာဝန်လောက်ကိုသာပြောနိုင်ပြီး အချိန်က တမိနစ်တောင် မကြာ လိုက်ပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ Interview လုပ်နည်းနဲ့ Reporting လုပ်နည်းကို မသိမသာသင် ပေးလိုက် တာပါပဲ။
နောက်တခု ကျနော်ရဲ့အားနည်းချက်က နိုင်ငံတကာသုံး အင်္ဂလိပ်စကားကို ရာနှုန်းပြည့်နားမလည်ခြင်း ပါ။ ဘန်ကောက်ထုတ် Nation သတင်းစာနဲ့ ဧရာဝတီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်းအပါဝင် သတင်းစာတချို့မှာ အင်္ဂ လိပ်ဘာသာနဲ့ ဆောင်းပါးရေးနေတဲ့ ကျနော်ဟာ ကိုယ်ဘာသာ ဒီလောက်ညံ့လိမ့်မယ်လို့ ထင်မထားခဲ့ ပါ။ စာအုပ်ကြီးစာအုပ်ငယ်လှန်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး ဆောင်းပါးထိုင်ရေးတာနဲ့ ဒီလို လူချင်းတွေ့၊ အမြန်ပြော၊ အမြန်နည်းလည်ဖို့ကိစ္စ သဘာဝချင်းမတူတာ။ သတင်းစာသုံးနိုင်ငံရေးစကားလုံးကြီးကြီးတွကိုသာ သိပြီး နေစဉ် သုံး ဝေါဟာရတွေကို မသိတာဟာလည်း အားနည်းချက်တခုပါပဲ။
ပထမ ပိုင်းမှာတော့ အိန္ဒိယဘက်ကလာတဲ့လူတွေ ပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်အသံဟာ မပီဘူးဆိုပြီးတောင် ကျနော်က နောက်လိုက်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ပြောတာကို ဆရာတွေက ကောင်းကောင်းနား လည်နေပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ နိုင်ငံတကာသင်တန်းတက်မယ်ဆိုရင် ဆရာတွေပြောသမျှကို နား လည်နိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်အတန်းရှိအောင် ကြိုပြင်ထားဖို့တော့ လိုပါတယ်။ နောက်တချက်က အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ စံချိန်ဝင်အောင် သတင်းဖတ်ခြင်းသင်ခန်းစာပါ။ ကျနော်တို့ DVB မှာဆိုရင်တော့ ဇော်ဂျီ ဖောင့်ကို ၁၁ ဆိုက်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ A4 တမျက်နှာကို ၂ မိနစ်ခွဲနဲ့ဝင် အောင် ဖတ်နိုင်ရင် Standard ဆိုတာမျိုးပေါ့။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးထားတဲ့သတင်းကို မြန်မာစာသတင်းဖတ်သလိုမျိုး ဘယ်လိုမှ မြန်မြန်နဲ့မှန်မှန် Standard ၀င်အောင် မဖတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အတော်စိတ်ပျက်ခဲ့ရပါတယ်။
၃ လတာ သင်တန်းပြီးခါနီးတော့ နိုင်ငံတ၀ှမ်းရှိ BBC ရေဒီယိုတွေဆီ လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာရေးဆင်းရပါတယ်။ ကျနော်တာဝန်ကျတဲ့မြို့က အင်္ဂလန်အရှေ့ပိုင်းရှိ Suffolk မြို့။ BBC ဆိုတာ Short Wave (လှိုင်းတို) ရေဒီယိုနဲ့ နိုင်ငံတကာဆီလွှင့်နေတာချည်းမဟုတ်။ သူ့ပြည်တွင်းမှာလည်း BBC FM ရေဒီယိုနဲ့ TV က ထင်ရှားလှပါတယ်။ မိုင်ပေါင်းသောင်းချီ အဝေးကနေလွှင့်နေရတဲ့ လှိုင်းတိုရေဒီယိုက ဈေးကြီးလွန်းပေ မယ့် FM ကတော့ စရိတ်သိပ်မရှိလှဘူးလို့သိရပါတယ်။ ပြီးတော့ Local (ဒေသတွင်း) မှာ လွှင့်တာဆို တော့ ဖမ်းရတာ အသံကြည်လင်တဲ့အပြင် ပရိသတ်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကိုလည်း ချက်ချင်းရနိုင်ပါတယ်။
သတင်းတပတ်ကြာ အဲဒီရေဒီယိုမှာ လေ့လာမှုအတွင်း ကျနော်မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်နေတာကတော့ အ ထက် တန်းစာမေးပွဲအောင်စာရင်း ထွက်တဲ့နေ့မှာ အထက ကျောင်းတခုဆီသွားပြီး Live သတင်းပို့ တဲ့အစီစဉ်ပါပဲ။ အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင် DVB ရေဒီယိုမှာ တာဝန်ထမ်းနေတာ ၁၀ နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ် ပေမယ့် ရေဒီယိုကား ဆိုတာကို တခါမှမမြင်ဖူးပါ။ ရန်ကုန်က မြန်မာ့အသံမှာတော့ ဒီကားမျိုးရှိလားမသိ ပါဘူး။ ရောက်တဲ့နေရာကနေ Live လွှင့်နိုင်ဖို့ အသံလွှင့်ရုံပါတဲ့ကားလို့ အလွယ်ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ ကားခေါင်မိုးပေါ်မှာ အဆင့်ဆင့်မြှင့်တင်နိုင်တဲ့ တာဝါတိုင်ပါရှိပြီး ကားထဲမှာတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ အသံ ပို့နိုင်တဲ့စက် တွေဆင်ထားတယ်ဆိုပါတော့။
ဒီလိုပြောလိုက်လို့ ကားဆရာ၊ စက်ဆရာ၊ သတင်းထောက်နဲ့ အသံပိုင်းအင်ဂျင်နီယာတွေ အများကြီး လာတယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့။ သတင်းထောက်တဦးတည်းက အဲဒီကားကိုမောင်းလာတာပါ။ အောင်စာ ရင်းဖွင့်ချိန်မှာ ကျောင်းသားနဲ့ ကျောင်းသားမိဘတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကို တိုက်ရိုက်ပေးပို့တဲ့ အဲဒီနေ့က မြင်ကွင်းကို အခုထိမြင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကာလက မြန်မာနိုင်ငံမှာ FM ရေဒီယိုတွေမရှိသေးပေမယ့် အခုတော့ FM အတော်များနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတင်ပြနေတဲ့ BBC FM လိုမျိုး တနာရီ တခါ ထူးခြားသတင်းတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီလွှင့်နိုင်မှုရှိမရှိ၊ သတင်းဖြစ်တဲ့နေရာကနေ တိုက်ရိုက်အသံလွှင့်နိုင်တဲ့ ရေဒီယိုကားရှိ မရှိတော့ ကျနော်မသိပါ။
နောက်တချက်ကတော့ အခု ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီး အထူးသဖြင့် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် အတော်တိုးတက်လာ တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်သတိထားမိသလောက်ကတော့ Print Journalism လို့ခေါ်တဲ့ စာ-နယ်-ဇင်း ဘက်မှာသာ လွတ်လပ်စွာ ရေးခွင့်ရလာတာဖြစ်ပြီး Broadcast Journalism လို့ခေါ်တဲ့ အသံလွှင့်မီဒီယာ ရေဒီယိုနဲ့ TV ဘက်မှာတော့ အားလုံးကို အစိုးရက ထိန်းချုပ် ထားဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် တ၀က်သာရသေးတယ်လို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ပရိတ်သတ် သောင်းဂဏန်းသာရှိတဲ့ စာ-နယ်-ဇင်း (ပုံနှိပ်စာပေ) ကိုသာ လွတ်လပ်ခွင့်ပြုထားပြီး ပရိတ်သတ်သန်းနဲ့ချီရှိနိုင်တဲ့ Mass media သို့မဟုတ် Broadcast Media ဖက်ကိုတော့ အစိုးရက အခိုင်အမာ ထိမ်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တာကို ထင်ရှားစွာ မြင်နေရပါတယ်။ ။
August 21, 2014 at 2:08 PM Reply
The Worst of the Worst: Press Freedoms in Burma
By Htet Aung Kyaw Thursday, November 7, 2002
November 07, 2002—While governments debate issues of taxation and free speech concerning the Internet, and parents tackle the thorny topic of just what web sites are suitable for their children, Burma’s military government hasa15 year prison sentence awaiting those found accessing the world wide web without proper permission.
The ruling State Peace and Development Council (SPDC) did open up the country’s first "Intranet" cafe earlier this year, whereaselected number of entertainment and non-political sites are available. But they remainalong way away from allowing the Burmese populace to use something that most of the world takes for granted.
Thirty journalists, who recently gathered in Cardiff, Wales—from countries such as Sierra Leone, Cuba and Burma—expressed their dismay, along with Burmese journalists inside and outside the country, at the continued heavy-handed censorship in Burma.
A radio journalist from war torn Sierra Leone appeared almost shocked to hear about the Burmese situation. "I don't understand why your country has no public Internet," said Seneh Thoronka. "Our people are poor but our media is rich." He added that although his country is continuing to bounce back fromadirty civil war, they have free access to the Internet as well as seven independent newspapers and eight independent FM radio stations.
"Even in my country, you can read every [web] page if you have enough money," said broadcast journalist Arnoldo Diaz from Cuba.
Journalists in Southeast Asia say that even inaregion where authoritarian rule is the prevailing style of government, the lack of access to media outlets in Burma is unparalleled. Abdul Raxak,asenior correspondent from Malaysia’s New Strait Times, said: "Most neighbors have free media. Even in my country the Internet is absolutely free''.
Malaysia, which continues to be controlled by Mahathir Mohammed, does not haveareputation for beingabastion for press freedoms, but even there, where other media outlets come under semi-government controls, the Internet is widely available. o­ne respected o­nline newspaper is Malaysiakini, however, Mahathir has yet to issue press cards to o­nline journalists.
A journalist from the British Broadcasting Company (BBC), who visits Rangoon regularly, says Burma’s Intranet is o­nly another propaganda tool. "It's just for counter attacks to western media," said the BBC journalist, who requested anonymity. "You can check The Myanmar Times, the New Light of Myanmar and the government web page. I think it’s meaningless."
However, another BBC journalist, formerlyasenior staffer at the New Light of Myanmar, disagrees. "You can criticize government officials but not to our colleagues."
He added that Burma has plenty of well-trained journalists who have never been given the opportunity to use their skills, due to the government’s strict controls. "They have no chance to write their own views, o­nly what the MI (military intelligence) orders them to."
The Burmese government controls the country’s o­nly two television stations as well as o­ne short wave and o­ne FM radio station. The government also owns two daily newspapers. Private journalists runamultitude of weekly and monthly journals, however, all these must first pass through the country’s infamous Press Scrutiny Board (PSB). The government controlled media usually o­nly show leaders of the military regime and their speeches, while private journals are left to run women’s photos and astrological predictions.
August 21, 2014 at 2:09 PM Reply
The former New Light of Myanmar journalist said, "I think TV Myanmar and Radio are the o­nly media in the world that just read hours of papers without having attractions or reports from correspondents." He says he blames the government for not trying "to learn what the audience wants to know" and for not being in touch with other international media styles.
The o­nly outlet Burmese residents have to news that is not controlled by the junta comes from four short wave radio programs that broadcast daily in Burmese—including the London-based BBC (Burmese Service), the Washington DC-based Radio Free Asia (RFA) and Voice of America (VOA) as well as the Oslo-based Democratic Voice of Burma (DVB). The programs are beamed into Burma from relay towers based in third countries.
"I spend five hoursaday listening to the transmissions. Because it's not o­nlyawindow to see outside but also to see inside the country," saidaveteran Rangoon journalist.
However, some have paidahefty price for tuning into these illegal broadcasts. Daw San San, an elected Member of Parliament from the opposition National League for Democracy, was sentenced to seven years in prison in 1998 for giving an interview to the BBC.
And U Than Chaung,afarmer from northern Burma, was sentenced to two years in prison for listening toaVOA broadcast in 1999.
While Mr Leo Nichols, the former de facto consular for Norway and other Scandinavian countries as well as the godfather of Aung San Suu Kyi, died in detention under mysterious conditions after he was sentenced in 1996 to three years in prison for usingafax machine without permission.
Even now, amidst calls for national reconciliation in Burma, the regime continues to arrest and detain individuals for possessing illegal literature. Two men were arrested in September for reading the New Era Journal, which is published in Bangkok by Burmese dissidents. They remain in custody, awaiting sentencing.
According to the Paris-based Reporter Sans Frontiers, at least 16-journalists are being detained in Burma. "Burma is o­ne of the countries of the world where the government has usedavery large spectrum of mechanisms and policies to oppress journalists and suppress freedom of expression," says Vincent Brossel, director of the Asia-Pacific Desk at RSF.
"As we usually say 'there is no freedom without press freedom'. But in the case of Burma, we might say 'there will be no press freedom without democracy," adds Mr Brossel.
Htet Aung Kyaw isacorrespondent for the Oslo, Norway-based Democratic Voice of Burma.
တော်လှန်ရေးသတင်းသမားတဦးရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (၂၅)
တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းမှ စစ်ဘေးရှောင်သူများကို ထီးခီး...
ကားတင်သွင်းသလို တွေးခေါ် စဉ်းစားပုံလည်း တင်သွင်းဖို...
ကလေး လုပ်သားတွေကို စာသင်ခန်း ပြန်ပို့ပါ
တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ပညာပေ...
တော်လှန်ရေးသတင်းသမားတဦးရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (၂၃)
တနသာင်္ရီအပတ်စဉ်။ သြဂုတ်လ ပထမ သတင်းပတ်။
ငွေရတုအလွန် ၈၈ မျိုးဆက်နဲ့ ပေးဆပ်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်
တော်လှန်ရေးသတင်းသမားတဦးရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (၂၂)